အယ်လီဖန်တာ လိုဏ်ဂူများ - ဝီကီပီးဒီးယား
အယ်လီဖန်တာ လိုဏ်ဂူများ သည် ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ စာရင်းဝင် နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဟိန္ဒူနတ်ဘုရား သီဝ အား ရည်မှန်း၍ တည်ဆောက်ထားသော ဘုရားကျောင်းလိုဏ်ဂူများ ဖြစ်ကြသည်။  ၎င်းတို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဟာရဋ္ဌပြည်နယ် အတွင်း မွမ်ဘိုင်းမြို့၏ အရှေ့ဘက် ၁၀ ကီလိုမီတာ (၆.၂ မိုင်) အကွာတွင် ရှိသော မွမ်ဘိုင်းဆိပ်ကမ်းရှိ အယ်လီဖန်တာကျွန်း သို့မဟုတ် ဂါရပူရီ (လိုဏ်ဂူမြို့တော်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။) တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုကျွန်းသည် ကမ်းလွန်တွင် တည်ရှိပြီး ဂျဝါဟာလာ နေရူး ဆိပ်ကမ်းမှ အနောက်ဘက် ၂ ကီလိုမီတာ (၁.၂ မိုင်) အကွာတည်ရှိကာ ဟိန္ဒူဘာသာဆိုင်ရာ လိုဏ်ဂူ ၅ ခု နှင့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် အချို့ ရှိပြီး ရေစည်များပါသော ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ လိုဏ်ဂူ ၂ ခုလည်း ရှိကာ ဘီစီ ၂ရာစုမှ ကျန်ရှိခဲ့သော ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ ဖြစ်သည်။
အယ်လီဖန်တာ လိုဏ်ဂူများတွင် ကျောက်တုံးကို ထွင်းထုထားသော ရုပ်တုများ ရှိပြီး ဟိန္ဒူဘာသာ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ အိုင်ဒီယာနှင့် ရုပ်ပုံများ ရောစပ်ပေါင်းထွေးခြင်းကို ပြသနေသည်။ ကျောက်ဂူမှာ ဘာဆော့ကျောက်တုံးကြီးကို ထွင်းထုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ခြွင်းချက်အဖြစ် ကျန်ခဲ့သည့် လက်ရာအချို့မှ အပ အနုပညာ လက်ရာအများစုမှာ ဖျက်စီးခြင်း ခံထားရသည် သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေကြလေသည်။ ပင်မ ဘုရားကျောင်း၏ မျက်နှာမူရာ နှင့် အခြားဘုရားကျောင်းများ တည်နေရာတို့မှာ မန္တလပုံစံ တည်ရှိသည်။  ကျောက်ထွင်းပုံများမှ ဟိန္ဒူ ဒဏ္ဍာရီများကို ဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြနေကြပြီး ကြီးမားသော တစ်ခုတည်း ထွင်းထုထားသည့် ၂၀ ပေ (၆.၁ မီတာ) တြိမုတိ သတ္တသျှီဝ (မျက်နှာသုံးဖက် သျှီဝနတ်ဘုရား) ၊ နာတာရာဂျာ (ကခုန်ခြင်း၏ ဘုရား)၊ ယောဂီသဗ္ဗရ (ယောဂ ဘုရား) တို့မှာ အလွန်ထင်ရှားသည်။ 
၁၉ရာစုမှစ၍ မည်သည့်နေရက်တွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ဂူများကို တည်ဆောက်ခဲ့သည် ဆိုသော အချက်ကို မှန်းဆတွေးတောမှုများစွာ ရှိသကဲ့သို့ ပညာတတ်တို့၏ လေ့လာ မှန်းဆမှုများလည်း ရှိသည်။ မှန်းဆကြသည့် နေ့စွဲများတွင် ၅ ရာစုမှ ၉ ရာစု အတွင်း အမျိုးမျိုးသော ဟိန္ဒူမင်းဆက်များ လက်ထက်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။  ၅ ရာစု နှင့် ၇ ရာစု အတွင်းတွင် ဖြစ်မည်ဟု အများစုက ခန့်မှန်းကြသည်။ ပညာရှင်အများစုက အေဒီ ၅၅၀ ခန့်တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ 
၎င်းတို့ကို အယ်လီဖန်တီ ဟု အမည်ပေးခဲ့ပြီး ထိုမှတဆင့် ပေါ်တူဂီ ကိုလိုနီတို့မှ ဆင်ရုပ်ကို တွေ့ရှိရာမှ အယ်လီဖန်တာဟု အမည်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ပေါ်တူဂီတို့သည် ကျွန်းပေါ်တွင် အခြေစိုက်ခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့၏ စစ်သားများက ရုပ်တုများနှင့် ဂူများကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ အဓိက လိုဏ်ဂူ ( ဂူအမှတ် ၁ သို့ မဟာလိုဏ်ဂူ) မှာ ပေါ်တူဂီတို့ ရောက်မလာခင် အထိ ဟိန္ဒူတို့ ဝတ်ပြုရာ ဂူဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ထိုကျွန်းတွင် ဘုရားရှိခိုးခြင်း မပြုကြတော့ပေ။ ဂူများကို ဆက်လက် မပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယ အရာရှိတို့က ၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ကြသည်။  အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးများကို ၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် ပြန်လည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။  ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော အယ်လီဖန်တာ လိုဏ်ဂူများကို ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ အဖြစ် သတ်မှတ်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် အိန္ဒိယ ရှေးဟောင်းသုတေသန ကွင်းဆင်းလေ့လာရေး အဖွဲ့မှ ထိန်းသိမ်းလျက် ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ Elephanta Island, Encyclopedia Britannica
↑ ၂.၀ ၂.၁ Carmel Berkson; Wendy Doniger; George Michell (1999)။ Elephanta: The Cave of Śiva။ Princeton University Press (Motilal Banarsidass, Reprint)။ pp. 3–5။ ISBN 978-81-208-1284-0။
↑ Brockman၊ Norbert (2011)။ Encyclopedia of Sacred Places (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ ABC-CLIO။ p. 153။ ISBN 9781598846546။
↑ Brunn၊ Stanley D. (2015)။ The Changing World Religion Map: Sacred Places, Identities, Practices and Politics (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Springer။ p. 514။ ISBN 9789401793766။
↑ "There are remains ofabrick built Buddhist stupa nearby which may belong to circa second century BC. Around it are seven smaller stupas, which may be votive." in Dhavalikar၊ M. K. (Madhukar Keshav) (2007)။ Elephanta။ Archaeological Survey of India။ p. 75။
↑ James Burgess (some additions by Indraji) (1872)။ Elephanta။ Gazetter Government of Maharashtra။ 25 November 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-02-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ Elephanta Caves (pdf)။ Unesco။ 2010-02-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Elephanta Caves။ Works Heritage: Unesco.org။ 2010-02-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Stella Kramrisch (1988)။ The Presence of Siva။ Motilal Banarsidass။ pp. 443–445။ ISBN 978-81-208-0491-3။
↑ Constance Jones; James D. Ryan (2006)။ Encyclopedia of Hinduism။ Infobase။ pp. 148–149။ ISBN 978-0-8160-7564-5။
↑ Stella Kramrisch (1988)။ The Presence of Siva။ Motilal Banarsidass။ pp. 443–459။ ISBN 978-81-208-0491-3။
↑ Trudy Ring; Robert M. Salkin; Sharon La Boda။ "Elephanta Island"။ International Dictionary of Historic Places: Asia and Oceania။ Taylor & Francis။ pp. 252–5။ ISBN 978-1-884964-04-6။
↑ George Michell (2015)။ Elephanta။ Jaico။ pp. 1–4, 30–33, 96–98။ ISBN 978-8-184-95603-0။
↑ Walter M. Spink (2005)။ Ajanta: The end of the Golden Age။ BRILL Academic။ pp. 182–183။ ISBN 90-04-14832-9။
↑ Charles Dillard Collins (1988)။ The Iconography and Ritual of Siva at Elephanta: On Life, Illumination, and Being။ State University of New York Press။ pp. 1–2, 20–27။ ISBN 978-0-88706-773-0။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အယ်လီဖန်တာ_လိုဏ်ဂူများ&oldid=705313" မှ ရယူရန်